ठाकुर-महतो सत्तारोहण: मुल्लाह की दौड मस्जिद तक ! - नेपालबहस
ठाकुर-महतो सत्तारोहण: मुल्लाह की दौड मस्जिद तक !
| ९:४३:२१ मा प्रकाशित
२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र जनता समाजवादी दलका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षबीच झाँगिदो प्रेम र त्यसले दिएको परिणाम हेर्दा हिन्दीमा एउटा चर्चित उखाँन ‘मुल्लाह की दौड मस्जिद तक’ निकै याद आइरहेको छ । कुनै बेला महतो र ठाकुरले मधेश विरोधी, विखण्डकारी र नश्लवादी चित्रण गरेका एमाले अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री ओली सत्तास्वार्थका लागि आज उनीहरुका परमप्रिय भइदिए ।
संविधान जारीसँगै करिब ६ बर्ष बढी सत्ता बाहिरको छट्पटाहाट भोगेका महतो र ठाकुर मधेश आन्दोलनको मर्म तिलाङ्जली दिदै र्ओली सत्ताको साझेदारी बनेका छन् । मधेशका मुद्धा संवोधन नभइ सरकारमा नजाने बताउँदै आएका ठाकुर- महतो पक्ष हिजो ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सग्लो पार्टीमा विभाजन र विग्रह मच्चाउँदै अघि बढेका ओलीलाई उनीहरुले दिएको सत्ता स्वार्थको टेको के कति बलियो छ ? भोलीका दिनमा देखिदै जाला तर ओलीले सत्ता लम्ब्याउन उनले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार एव पुनर्गठन हेर्दा लाग्छ, ओली सत्ताको साँचो अब उनीबाट पनि बाहिर गइसकेको छ ।
यसअघि आफैंले काम गर्न नसकेको, कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै हटाएका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा फेरि सहभागी गराउन ओलीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने अब ओली सत्ता स्वयम् ओलीको नियन्त्रणबाट बाहिर गइसकेको भान हुन्छ । उनको सत्ता निर्देशित सत्तामा रुपान्तरण भइसकेको छ भनेर बुझन जो कोहीलाई पनि गाह्रो हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको अवस्थामा निर्वाचनसम्मका लागि सत्तामा रहन अर्को कुनै दलको साथ समर्थन आवश्यक पर्ने विषय होइन । तर जसपाका ठाकुर र महतोले उठाउँदै आएका नागरिकता, लगायतका मागहरु अध्यादेशबाट संवोधन गर्दै उनीहरुलाई सत्तामा लैजानुले ओली चुनाव होइन सत्ता लम्बाउन चाहन्छन् प्रष्ट पारेको छ । उनकै सिफारिसबाट मारिएको प्रतिनिधिसभा निकट भविश्यमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनजीवित हुँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ ।
सग्लो पार्टीमा विभाजन र विग्रह मच्चाउँदै अघि बढेका ओलीलाई उनीहरुले दिएको सत्ता स्वार्थको टेको के कति बलियो छ ? भोलीका दिनमा देखिदै जाला । ओलीले सत्ता लम्ब्याउन गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार र एव पुनर्गठन हेर्दा लाग्छ, ओली सत्ताको साचो अब उनीकाे नियन्त्रणमा छैन ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपित भएपछिको संकट टार्न र आफु सत्ताबाट बाहिरने अवस्था आउन नदिन ओलीले यो अन्तिम प्रयास गरेकाे विश्लेषण गरिएको छ । एमालेका माधव नेपाल, भीम रावल लगायत ११ जनालाई पार्टीबाट निश्कासित गरेपनि नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलाई फकाउन जारी राखेको प्रयासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थपना पछि पनि ओली सत्ता सुरक्षित राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले पनि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा पुगेर हस्ताक्षर गर्ने बाकी १२ जना नेताहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न हच्किरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका यी दोस्रो तहका केही नेतालाई मात्र पार्टीमा अडाउन सकेमा नेपाल लगायतका केही नेताहरुलाई पार्टीबाट निश्कासित गरेको अवस्थामा पनि संसदमा अंकगणित फेरी पनि ओलीकै पक्षमा रहने देखिन्छ । त्यसैले एकता र सहमतिको बाहानामा अदालतको फैसला नआइन्जेल ओलीले बाँकी नेतालाई कारवाही नगर्ने पक्का छ । त्यो खेलमा ओली लागिसकेका छन् । त्यसैका लागि नेपाल पक्षका केही नेतालाइ मन्त्री दिन, केही मन्त्री पद ओलीले आफैसँग राखेको हुन सक्ने देखिन्छ । यसबाट कुनै बेला नेपाल पक्षमा रहेका शेरबहादुर तामाङलाई पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सचिव गराउँदै मन्त्री बनाएर ‘नेपाल तिर बस्दा खाली यता आउँदा मन्त्री’ हुन सकिने ललीपप पनि ओलीले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई देखाएका छन् ।
के जसपा नेताद्वय ठाकुर र महतोले यति चाडै विर्सिसके होलान्, हिजो मधेशको माग संवोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मत नदिएर संविधान संशोधन पारित हुन नदिने यिनै ओली हुन भन्ने । समथर भूभाग जति चाहिने भए पारी विहारतिर लाग त्यता सबै सम्मो छ, भन्नेदेखि नागरिकता चकलेट होइन बाड्नलाई भन्दै उग्रराष्टवादका कुरा गर्दै बर्षो नागरिकता कानून अडकाउने यिनै ओली नै होइनन् ?
ओलीको सत्ता लम्बाउने यो प्रयासलाई थाती राखेर अब मधेश केन्द्रित दल जसपाका ठाकुर र महतोको सत्ता यात्रा विश्लेषण गरौं। यतिबेला संविधान संशोधन माग राख्दै जसपाले गरेको आन्दोलन केवल सत्ता नपाएको सनक मात्र थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । ओली सत्तामा पुग्न ठाकुर र महतो पक्ष पार्टी विभाजन गर्न समेत पछि परेनन् ।
के जसपा नेताद्वय ठाकुर र महतोले यतिचाडै विर्सिसके होलान्, हिजो मधेशको माग संवोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मत नदिएर संविधान संशोधन पारित हुन नदिने यिनै ओली हुन भन्ने । समथर भूभाग जति चाहिने भए पारी विहारतिर लाग त्यता सबै सम्मो छ, भन्नेदेखि नागरिकता चकलेट होइन बाड्नलाई भन्दै उग्रराष्टवादका कुरा गर्दै बर्षो नागरिकता कानून अडकाउने यिनै ओली नै होइनन् ?
सायद महतो र ठाकुरले विर्सिसकेका होलान् । २०७३ फागुन २३ मा ओलीको नेतृत्वमा संचालन एमालेले संचालन गरेको मेची–महाकाली अभियानमा मधेशवादी दलहरुले गरेको विरोधमा सप्तरीको मलेठमा पाँच जना मधेशी युवाले ज्यान गुमाएको र थुप्रै घाइते भएको । जुन घटना ओलीकै द्म्भ र जिद्दी सिर्जित भएको थियो ।
पछिल्लो राजनीति समिकरण र परिवर्तनप्रति राजनीतिक विश्लेषण तथा मधेश मामला जानकार सीके लाल ठाकुर र महतो ओलीसत्ताको सहयात्रसँगै मधेश विद्रोहमा ‘कमा’ होइन अब ‘फुलस्टप’ लागिसकेको बताउँछन् ।
‘यो पुरै आत्मसर्पण हो । उहाँहरूले मधेश आन्दोलनको एजेन्डालाई बिर्सनु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। सबै ओलीसँग छ भन्ने लाग्यो उहाँहरुलाई । भनिन्छ नि ‘पानीमा रहेर मगरमच्छसँग बैर गर्नुहुँदैन’ भनेर । हो, उहाँहरू यही सिद्धान्ततर्फ लाग्नु भयो। सरकारमा गएर फाइदाभन्दा नोक्सान हुने सम्भावना मैले बढी देखेको छु । किनभने अहिले चुनाव गराउनु पर्नेछ । क्षति हुने सम्भावना बढी छ । अहिलेको सरकार त बदनाम भइसकेको छ।’ विश्लेषक लालले भने ।
विश्लेषक लालले भनेजस्तै ठाकुर र महतोको ओली सत्तारोहण र यो गठबन्धनले मधेशको आन्दोलनलाई फुलस्ट मात्र लगाएको छैन । उनीहरुको उठाएका मधेशमुद्धा, माग र आन्दोलन केवल सत्ता प्राप्तिको भर्याङ्ग मात्र थियो भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ।
महतोहरुको सत्तारोहण सँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् । संविधान जारी हुॅदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्नेको घाॅटी कसरी जोडियो ?अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादका कुरा गरेर मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम ? नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाॅ जोडिएको रहेछ ? दुबैको मुकुण्डो उत्रिएन त ? भटराईका सवै प्रश्नहरुकाे एउटै उत्तर हो सत्ता । यो सब सत्ता केन्द्रित राजनीतिक नै थियो । आखिर मुल्लाह कि दौड मस्जिद तक न हुन्छ ।
दोर्दी खोलाले १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा २ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना १५ मिनेट पहिले
पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास २० मिनेट पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध २३ मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? ४१ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ५२ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ५४ मिनेट पहिले
भक्तपुरका खाद्यान्न स्टोरमा म्याद गुज्रेको सामान फेला २ दिन पहिले
मुक्तिनाथ यात्राको त्यो क्षण ४ हप्ता पहिले
बिरामी कुरुवाका लागि प्रतीक्षालय निर्माण शुरु २ हप्ता पहिले
अघिकांश सूचक नकारात्मक रहेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि १ हप्ता पहिले
एचआईभी भाइरसबाट निको भए दोस्रो व्यक्ति ९ महिना पहिले
च्याउफार्ममा आगलागी : पाँच हजार किलो च्याउ जलेर खरानी ६ महिना पहिले
जिन्दगीमा तै एउटा आफ्नो थिइस, तैले पनि आँखो देखाईदिस ! १ महिना पहिले